तपाईं कसरी परमेश्वरको नजिक हुन सक्नुहुन्छ? | सुसमाचार
१. के परमेश्वर सबै प्रार्थना सुन्नुहुन्छ?
प्रार्थना गरेर उहाँको नजिक हुन सबै मानिसहरूलाई परमेश्वर निम्तो दिनुहुन्छ। (भजन ६५:२) तर उहाँ जुनसुकै किसिमका प्रार्थना भने सुन्नुहुन्न। जस्तै: आफ्नी पत्नीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पतिको प्रार्थना उहाँ सुन्नुहुन्न। (१ पत्रुस ३:७) इस्राएलीहरूले खराब काम गर्न नछोड्दा परमेश्वरले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभएन। तैपनि गम्भीर पाप गरेका मानिसहरूले पछुतो गरे भने परमेश्वर तिनीहरूको प्रार्थनासमेत सुन्नुहुन्छ। त्यसैले कुरा प्रस्ट छ, यहोवालाई प्रार्थना गर्न पाउनु एउटा सुअवसर हो।—यशैया १:१५; ५५:७ पढ्नुहोस्।
प्रार्थना हाम्रो उपासनाको भाग हो। त्यसैले हामीले सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वरलाई मात्र प्रार्थना गर्नुपर्छ। (मत्ती ४:१०; ६:९) हामी पापी भएकोले हामीले येशूको नाममा प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनभने उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। (यूहन्ना १४:६) कण्ठ गरेको वा अरूले लेखिदिएको प्रार्थना दोहोऱ्याएको यहोवा परमेश्वर मन पराउनुहुन्न। हामीले मनदेखि नै प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ।—मत्ती ६:७; फिलिप्पी ४:६, ७ पढ्नुहोस्।
सृष्टिकर्ता यहोवा हामीले मनमनै गरेको प्रार्थना पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। (१ शमूएल १:१२, १३) उहाँ हामीलाई जुन बेला पनि प्रार्थना गर्न निम्तो दिनुहुन्छ। जस्तै: बिहान उठेपछि, राती सुत्ने बेलामा, खाना खानुअघि र विभिन्न समस्या भोग्नुपर्दा।—भजन ५५:२२; मत्ती १५:३६ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरको नजिक हुनु सजिलो कुरा होइन। किनभने परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने र पृथ्वीमा शान्ति स्थापना गर्ने उहाँको प्रतिज्ञाको खिल्ली उडाउने मानिसहरूबीच हामी बसेका छौं। (२ तिमोथी ३:१, ४; २ पत्रुस ३:३, १३) त्यसैले हामीलाई सँगी-विश्वासीहरूको प्रोत्साहनजक सङ्गति चाहिन्छ।—हिब्रू १०:२४, २५ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूसँग सङ्गत गर्दा हामी परमेश्वरको नजिक हुन मदत पाउँछौं। अरूको विश्वासबाट प्रोत्साहन पाउने एउटा राम्रो मौका यहोवाका साक्षीहरूको सभा हो।—रोमी १:११, १२ पढ्नुहोस्।
४. तपाईं कसरी परमेश्वरको नजिक हुन सक्नुहुन्छ?
परमेश्वरको वचनबाट सिकेको कुरामा मनन गरेर तपाईं उहाँसँग नजिक हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको काम, उहाँको सल्लाह र उहाँले गरेका प्रतिज्ञाहरू विचार गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दा र मनन गर्दा परमेश्वरको प्रेम र बुद्धिप्रति हाम्रो साँचो कृतज्ञता बढ्नेछ।—यहोशू १:८; भजन १:१-३ पढ्नुहोस्।
यहोवा परमेश्वरप्रति भरोसा र विश्वास छ भने मात्र तपाईं उहाँसँग नजिक हुन सक्नुहुन्छ। विश्वास बोटबिरुवा जस्तै हो, जसलाई पोषण चाहिन्छ। आफूले विश्वास गरेको कारणबारे मनन गरिरहेर तपाईंले आफ्नो विश्वासलाई निरन्तर पोषण दिइरहनुपर्छ।—मत्ती ४:४; हिब्रू ११:१, ६ पढ्नुहोस्।
५. परमेश्वरको नजिक भएर तपाईं कस्तो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ?
यहोवालाई प्रेम गर्नेहरूको उहाँ ख्याल राख्नुहुन्छ। तिनीहरूको विश्वासलाई र अनन्त जीवनको आशालाई खतरा पुऱ्याउने जुनसुकै कुराबाट उहाँ तिनीहरूलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। (भजन ९१:१, २, ७-१०) हाम्रो स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने र हाम्रो आनन्द गुम्ने खालको जीवनशैली नबिताउन उहाँ हामीलाई सजग गराउनुहुन्छ। यहोवा हामीलाई उत्तम जीवन बिताउने तरिका सिकाउनुहुन्छ।—भजन ७३:२७, २८; याकूब ४:४, ८ पढ्नुहोस्।